CHIWEENIE DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Chiweenie Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Chihuahua / Dachshund Dogs Nooc Isku Daran
Dolly the Chiweenie (Chihuahua / Dachshund mix) at 2 sano jir
Naaneysta: Mexico Hotdog
Chiweenie ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Dachshund . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Chiweenie
Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naadiga = Chiweenie
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Chiweenie
Diiwaan Geliyaha Nashqadeeyaha = Chiweeni
'Tani waa Sonkor. Iyadu waa Chiweenie. Waxaan ka korsanay haweeney sawirkeeda soo dhigtay Facebook. Waxaan tusay sawirkeeda xaaskeyga waxaan ku iri halkan waa eey leh jacayl badan oo la bixiyo. Way ogolaatay, markaa waxaan la xiriirnay haweeneyda soo dhigtay xayeysiinteeda waxaanan ku nidhi waxaan jeclaan lahayn inaan qaadanno Sonkor. Waxaan soo kaxeeyey awowgey Triston oo waanu soo qaadnay. Markii hore way cabsatay oo way baqday dadka dartii ayaa u kaxeynaya una celinaya maxaa yeelay ma aysan siin karin ilaalin. Waxaan u maleynayay in qof kasta oo macquul ah uu fiirin karo iyada oo uu ogaado in xaaladdu ay tahay uun ka soo horjeedka eeyaha yaryar. Sikastaba 4-tii maalmood ee ugu horeysay waxay ku nagaatay qolkeena jiifka sariirteena waligeed ma dhaqaaqin. Waxaan ka walaacnay caafimaadkeeda sidaa darteed xaaskeyga waxay isticmaashay siriinjo ay ka buuxdo biyo waxayna ku qasabtay inay cabto. Aakhirkii waxay bilawday inay cuntaan wixii aan ku shubnay weelkeeda iyadoo jacayl badan iyo fiiro badan ay ka soo baxday qolofteeda. Maaddaama ay aniga iyo xaaskeyga oo kaliya guriga ku jiraan Sonkorta 24 saac ayaa la helaa. Hadda iyadu aad bay u kharribtay waxayna filaysa feejignaanta daqiiqadda aan ka imaado shaqada ilaa sariirta. Waan siinaa iyada. Waxay farxad badan ku soo kordhisay nolosheena. Waa wax cajiib ah.
Duke the Dachshund / Chihuahua mix (Chiweenie) at 3 sano— 'Duke waa badbaadiye 3 sano jir ah Chiweenie. Isagu waa qof caqli badan oo dabeecad jacayl leh. Jecel inuu ordo oo ciyaaro waana mid aad u bulshada eyda kale . Waxay sameystaan ​​eeyo aad u fiican hadaad leedahay aqal yar laakiin sidoo kale waxay jecel yihiin daarada waaweyn inay duurka ku dhex ordaan. Isaga ayaa isku dar ah a dapple Dachshund ka muuqato calaamadihiisa gaarka ah laakiin wuxuu leeyahay wax iska cad Chihuahua dhagaha waaweyn oo dhibic leh.
Daphnee, oo ah 3½-jir Miniature Dachshund / Chihuahua mix (Chiweenie) - 'Hooyadeed waxay ahayd Dachshund aabena Chihuahua.'
Frankie the Chiweenie oo 4 jir ah— 'Waa ilmo yar oo dhego weyn!'
teaup yorkie oo lagu qasay chihuahua
Charlie the Chiweenie puppy at 12 toddobaad jir— 'Charlie waa mid aad u jecel oo qurux badan. Wali waxbaan ka baranaynaa isaga oo dhan. Walina waxaan si adag isugu dayaynaa tareenka musqusha isaga. Arrghhh '
Frida & Kahlo the Chiweenies at 10 bilood jir— 'Frida iyo Kahlo waa 2 gabdhood oo walaalo ah' 50% Chihuahua iyo 50% Dachshund . Hooyadood waa Chihuahua oo ah madax madow oo caan ku ah saddex-midab aabbahoodna aabbona waa midab casaan ah jaakad siman oo loo yaqaan 'Miniature Dachshund'. Waxay horey u gaareen cabirka dadka waaweyn, 16 inji oo dherer ah, 12 inji oo xabadka ah iyo 10 inji qoorta oo midkiiba uu yahay 9 rodol. Waxaan qorsheyneynaa inaan xakameyno cunnadooda si aan ugu tiirsanaano, si aysan ugu dhicin dhibaatooyin dhabarka ah. Waxay yihiin lamaanayaal farxad leh eeyaha dhabta ah ! Laakiin iyaguna way jecel yihiin socod dheer , socodka, dibedda iyo safarka baabuur. Waxay kala yihiin adag tahay in la tababaro maxaa yeelay iyagu waa madax adag yihiin, laakiin aad u caqli badan oo leh dulqaad iyo daaweyn, waxay bartaan xeerarka si fiican. Eeyaha cajiibka ah ee jecel. Waxay barteen inay lugeeyaan xarig la'aan kadib markay ku socdeen muddo 10 bilood ah xarig gaaban oo 5 cagood ah. Dareenka ugaarsiga ayaa aad caan u ah. Way ciyo, laakiin iyagu ma ahan kuwo dagaal badan ama muujiya wax calaamado ah oo dabeecad dagaal ah. Ciddiyaha ayaa u baahan in la jaro ama la xareeyo badanaa maxaa yeelay waa eeyo gudaha ku jira ciddiyaha dhaadheerna waxay dhaawici karaan qaabka lugaha. Waan jeclahay iskudhafkan!
Frida & Kahlo the Chiweenies at 10 bilood jir
Frida & Kahlo Chiweenies oo ah eeyo yaryar
'Negra waa walaasha Frida iyo Kahlo. Halkan waxaa lagu muujiyey 10 bilood jir. Dhamaantood waa 50% Chihuahua iyo 50% Dachshund. Hooyadood waa Chihuahua oo ah madax madow oo caan ku ah saddex-midab aabbahoodna aabbona waa midab casaan ah jaakad siman oo loo yaqaan 'Miniature Dachshund'. Negra wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro kubbadda isla markaana uu calaliyo lafaha. '
The Evil Dr Porkchops Chiweenie (timo dhaadheer Chihuahua / Dachshund mix) oo ah eey 10 jir ah— 'La kulan sharta Dr Porkchops. Waa magac weyn iyada maxaa yeelay # 1 waxaan jecel nahay Toy Story iyo # 2 iyadu waa super macaan iyo waxa ugu fog sharka. Waa nala siiyay maxaa yeelay qashinku wuxuu ahaa uur lama filaan ah mana aysan doonayn eeyo oo dhan. Aad bay u macaan tahay! Waxay ku dhacday jacaylka our God dibi . Godkayagu ma lahayn qashin wuxuuna hooyada ka yahay Dr Chops. Waxay yihiin kuwo aad u madadaalo leh oo midba midka kale ku wanaagsan yahay. Tababarka guriga way fududahay maxaa yeelay waxaan haynaa laba eey oo kale sidaa darteed waan ka saarnaa mar kasta oo ay baxaan. Waxay u shaqeysay si ka wanaagsan sidii la filayay. Annagu ma helayno kanaalka Ey Whisperer daaran yahay. Waxaan maqlay farsamooyinkiisa oo shaqeynaya. Waxaan ubaahanahay inuu iga caawiyo kan Doberman . Waa ilmo 75 rodol ah oo isaguna waa ka baqay Dr Chops hadaad qiyaasi karto. Waad ku mahadsan tahay boggan. Waxay ahayd waxtar badan!
'Kani waa Chiweenie Buster. Wuxuu joogaa qiyaastii 8 bilood halkan. Dhagaha ayaa had iyo jeer kor u kaca oo aad buu ula socdaa wax kasta oo socda ilaa uu daal mooyee markaa labada dhagoodba way fooranayaan indhihiisuna way jajabayaan. Wuxuu leeyahay shakhsiyad sidan u weyn, wuxuu ku soo koray inuu ila shaqeeyo oo wuxuu leeyahay dhammaan shaqaalahayga oo dhan wuu duudduubay wuxuu u tegayaa mid cunto, mid kale oo caloosha lagu xoqayo iyo mid kulaylinta la gashado. Markuu helo toy cusub ama daaweyn waa inuu u lugeeyaa miis kasta oo muujinaya! Wuxuu jecel yahay carruurta, markaan nahay dibedda loo baxo waa inuu tago si uu uga helo xayawaanka dhammaantood. Markuu yaraa waxaan daaweyntiisa ka qaadi jiray ama gacmahayga ayaan afka saari jiray intuu wax cunayo, si marka ilmo yar u ag joogo oo ay u sameeyaan uusan u qaniinin, taasina waxay shaqeysay markii saaxiibkay 2 - sano jir ayaa waxyaabo ka qabsanaya isaga. Wuu fariistaa oo wuxuu sugaa iyada inay xiisayso markaasuu markale sooqabtaa. Waan jeclahay daawashada Eyga Whisperer waxaanan isticmaalay qaar ka mid ah qaababkiisa, sida ka dhigista Buster inuu igu sugo inaan galo ama ka baxo guriga kahor intuusan soo galin. Marka banaanka la joogo, haddii aan arko eey kale ama qof waxaan dhahaa 'Maya Bark' oo si dhaw ayuu u daawan doonaa laakiin ma ciyi doono. Waa eey aad u caqli badan, waxaan ka helaa amaan badan sida uu u dhaqmay. Runtii wax dhibaato ah kalamaan kulmin tababarka wuxuu ahaa mid si fudud ufududeyn kara isla markaana si dhaqso leh u barto tabaha. '
'Kani waa noo Chiwee Dexter yar. 9 bilood ayuu ku jiraa sawirkan wuxuuna neceb yahay barafka. Waxaa iska lahaa reer kale oo si fiican looma daryeelin, sidaa darteed aniga iyo caruurtayda waan qaadanay. Kuweena Gorgor eey 12 sano jir ah ayaa dhintey Dexter wuxuu nolosheena ku soo galay waqti ku habboon. Isagu waa eey macaan sidan oo kale 3da caruurtayda ahna jacayl badan ayaa siiya. Lahaanshaha qaar arrimaha tababarka dheriga , laakiin sabir iyo jadwal, dhammaan waa inay shaqeeyaan. '
Chevy the Chiweenie 3 sano jir
'Kani waa 1 jirkey Chiweenie oo lagu magacaabo Luigi Von Hunkledink Sabo. Hooyadiis waxay ahayd Dachshund , aabe wuxuu ahaa a Toy chihuahua . Wuu koray, culeyskiisuna waa 6 rodol oo keliya. Waa nin aad u daacad ah oo macaan. Wuxuu sameeyaa buuqii ugu qosolka iyo sawaxanka badnaa markuu ciyaarayo. Isagu waa mid caqli badan, horeyba wuu ogyahay sida loo sameeyo fadhiiso, jiifso, hadal, tuugso, istaag . Wuxuu yaqaan waxa banaanka u baxa, bye-bye, iyo socod soco waxaa loola jeedaa! Aad ayaan ugu faraxsanahay isaga waana ku jeclahay qalbigayga oo dhan! Aad buu u macaan yahay, wuxuuna jecel yahay salaaxida. Waxaan ilaaway inaan dhagta u dhigo !! Waxay ugu dhowyihiin sida jirkiisa oo dhan, wuuna jecel yahay inuu xakameeyo. Wuxuu ka yeeli karaa inay feejignaadaan, dhinaca (oo wuxuu umuuqdaa batman) ama si toos ah gadaal! Xaqiiqdii waxay isaga ka dhigayaan mid ka mid ah noocyada! '
Daphnee, oo ah 3½-jir yar oo isku dhafan oo isugu jira Dachshund / Chihuahua (Chiweenie)
'Jager aabihiis waa shaashad yar oo nadiif ah Dachshund (wuxuu leeyahay midabaynta saxda ah) hooyadiisna waa Chiweenie cas (badh yar Dachshund / badh Chihuahua).
'Jager wuxuu qiyaastii jiraa 14 toddobaad hadda. Isagu waa wiil aad u faraxsan, cajaa'ib yar oo ujeedkiisu yahay inuu ka farxiyo. Wuxuu jecel yahay fiiro gaar ah - mararka qaar wuu u ciyi doonaa ama u ciyi doonaa, in kasta oo isagu uusan helin dareen markuu sidan sameeyo. Wuxuu helaa 'badan oo wanaagsan iyo' Jager wanaagsan 'markuu aamusanyahay oo uu dhaqmayo. Wuxuu baranayaa 'fadhiisasho' iyo 'fadhiis,' in kasta oo aan u arko inuu aad ugu habboon yahay daaweynta, waxay u baahan tahay waqti dheeri ah iyo dulqaad isaga inuu is dejiyo oo ku filan inuu sameeyo khiyaanada. Waxaan isticmaalayaa tababarka gujiyaha, wuxuuna umuuqdaa inuu sifiican ugajawaabayo. Wuxuu jecel yahay kubadiisa - mar hore ayuu ciyaari karaa dheelsi! Wuxuu si dhakhso leh ugu qabtay taas. Waxaan ku noolahay guri xarago, sidaa darteed waxaan isku dayaa inaan u maro ugu yaraan laba 10-15 daqiiqo socod maalin kasta, anigoo arkaya inaanan daarad u lahayn isaga. Isaga wuxuu raacayaa cidhibteyda si aad u wanaagsan, in isagu badiyaa xadhig ka maqan yahay.
Waa midab qurux badan, oo aad u yar. Labada lamaane waxay moodeen inuu yahay fallaadh marka hore, oo waxaan maqlay inuu umuuqdo a jiir ama jiir in ka badan hal jeer. Badanaa, waxaan hayaa dad oooh iyo wax soo jiidanaya oo ii sheegaya inuu yahay kan ugu quruxda badan, ugu yar ee ay arkeen. Wuxuu saaran yahay dhinac yar - Waxaan jeclaan lahaa inuusan sii kordheynin. '
Eeg tusaalooyin badan oo Chiweenie ah
Chiweenie Sawirada 1
Chiweenie Sawirada 2
Chiweenie Sawirada 3
Liiska eeyaha Dreed ee 'Dachshund Mix'
feeryahanka qas chihuahua muqisho for sale
madow iyo caddaan spaniel
xiisaha eey dibi Maraykanka
3 billood dibi da 'ah
shaybaarka madow ee chesapeake bay retriever mix
waa maxay nolosha turkey